Emaillada isweydaarsiga iyo walxaha uu tirtiray khaladku. Ha tirtirin E-mayllada sanduuqa boostada.
Bogga ugu weyn Products DataNumen Exchange Recovery Tirtir walxaha Sarrifka qalad
Tirtirno Waxyaabaha Kala Beddelka ee Qalad? DataNumen Exchange Recovery Waad tirtiri kartaa iyaga!
Tirtir iimaylka isweydaarsiga iyo walxaha qaladka:
Haddii aad tirtirto emayl ama shey kale oo ku jira sanduuqa isweydaarsiga, adoo gujinaya batoonka "Del", ka dib waxaa loo wareejinayaa galka "Waxyaabaha la tirtiray". Waad ku soo celin kartaa adiga oo si fudud ugu beddelaya galka "Alaabada la tirtiray", helitaanka emaylka ama shayga aad rabto, oo aad dib ugu soo celiso halkii ay markii hore ka timid ama faylalka kale ee caadiga ah.
Si kastaba ha noqotee, haddii aad tirtirto shey Isweydaarsi sida lagu sharraxay saddexda xaaladood ee soo socda, markaa si joogto ah ayaa loo tirtirayaa:
Adiga ama maamule ayaa adeegsanaya hawlgalka tirtirka adag (Shift + Del) si aad u tirtirto shayga isdhaafsiga. Hawlgalka adag-tirtirka ayaa kuu ogolaanaya isweydaarsiga inuu tirtiro shayga adigoon u dirin galka "Alaabada la tirtiray" ama keydka alaabada alaabta la tirtiray markii hantida Alaabada Tirtirmay aan la awoodin.
Adiga ama maamule ayaa shayga ka tirtiraya galka "Alaabada la tirtiray".
Maamulaha ayaa si kama 'ah u tirtiraa sanduuqa boostada ama xitaa serverka sarrifka ah marka uu isticmaalayo barnaamijka Microsoft Exchange Administrator. Xaaladda noocaas ah, Isweydaarsiga wuxuu si joogto ah uga tirtirayaa sanduuqaas ama server-ka galka.
Xitaa haddii shayga si joogto ah loo tirtiro, weli waad awoodi kartaa inaad ka soo kabato galka khadka ()ost) feyl u dhigma sanduuqa isweydaarsiga, sida OST faylka ayaa ah nuqul qadla'aan ah oo kujira sanduuqa boostada ee kujira serverka. Waxaana jira laba xaaladood:
Kama aad iswaafajin OST faylka la geli serverka. Xaaladdaas, sheyga laga tirtiray serverka wali wuu ka jiraa OST si caadi ah u fayl garee.
Waad waafajisay OST faylka la geli serverka. Xaaladdaas, sheyga laga tirtiray serverka sidoo kale waa laga saari doonaa OST gudbiso.
Labada xaaladood midkood, waad isticmaali kartaa DataNumen Exchange Recovery inuu ka soo cesho shayga la tirtiray ka OST faylka. Laakiin xaaladaha kala duwan, waxaad filan kartaa inaad shayga aan la tirtirin ka hesho meelo kala duwan.
Isticmaalka DataNumen Exchange Recovery si aan loo tirtirin walxaha is dhaafsiga ee sida joogtada ah loo tirtiray:
Fadlan samee sida soo socota si aad u soo kabsato walxaha sida joogtada ah u tirtiray DataNumen Exchange Recovery:
Kombuyuutarkaaga maxaliga ah, ka hel OST faylka u dhigma sanduuqa isweydaarsiga meesha aad rabto inaad ka tirtirto walxaha. Waad go'aansan kartaa meesha feylku ku saleysan yahay hantidiisa lagu soo bandhigay Muuqaalka. Ama isticmaal Search ku shaqee Windows si aad u raadiso. Ama ka raadi dhowr goobood oo horay loo sii cayimay.
Xidh Muuqaalka iyo codsi kasta oo kale oo laga yaabo inuu marin u helo OST gudbiso.
Xulo OST faylka laga helay tallaabada 1aad asal ahaan OST faylka la soo celiyo
Guji “Start Ladnaansho ”badhanka si aad uga soo kabato isha OST gudbiso. DataNumen Exchange Recovery iskaan doonaa oo soo ceshan doonaa walxaha tirtiray ilaha OST faylka, oo ku keydi faylka cusub ee Muuqaalka 'PST' oo magaciisa lagu qeexay tallaabada 5.
Kadib nidaamka dib u soo kabashada, waxaad isticmaali kartaa Microsoft Outlook si aad u furto faylka PST ee go'an oo aad uhesho walxaha aan la tirtirin Haddii aadan iswaafajin OST ku fayl geli adeegaha, markaa waxaad ka heli kartaa walxaha aan la tirtirin goobahooda asalka ah. Si kastaba ha noqotee, haddii aad horey u waafajisay OST faylka, markaa waxaad ka heli kartaa walxaha aan la tirtirin meelaha ay si joogto ah u tirtiraan. Tusaale ahaan, haddii aad isticmaasho badhanka "Shift + Del" si aad si joogto ah email uga tirtirto galka "Inbox", markaa DataNumen Exchange Recovery dib ugu soo celin doonaa galka "Inbox" kadib geedi socodka soo kabashada. Haddii aad isticmaasho badhanka "Del" si aad uga tirtirto emaylkan galka "Inbox", ka dibna aad si joogto ah uga tirtirto galka "Alaabada la tirtiray", ka dib soo kabashada ka dib, waxaa lagu soo celin doonaa galka "Waxyaabaha la tirtiray".
Fiiro gaar ah: Waxaad ka heli kartaa waxyaabo nuqul aan la tirtirin oo ku jira faylalka "Recovered_Groupxxx" Fadlan iska dhaaf iyaga. Sababtoo ah mararka qaarkood markaad shay ka saarto sanduuqaaga Beddelka oo aad la waafajiso OST faylka, Muuqaalka ayaa si nuqul ah u samayn doona nuqullo nuqul ah. DataNumen Exchange Recovery waa mid aad u awood badan oo ay ku soo ceshan karto dhammaan nuquladan aan caadiga ahayn sidoo kalena ula dhaqmi karto sidii lost & alaabada la helay, oo la soo helay lana galiyay faylal loo yaqaan "Recovered_Groupxxx" oo ku jirta faylka PST ee go'an.